စီးပွားရေးဒိုင်ယာရီ ( Jan10,2019) | မာသင်
စီးပွားရေးဒိုင်ယာရီ ( Jan10,2019)
အိမ်ထောင်လဲမကျသေးဘူး၊ ကလေးလဲမရှိဘူး။ကလေးယူဖို့လဲစိတ်မဝင်စားသေးဘူး ဆိုတဲ့အချိန်မှာ ကလေးသေးခံဘောင်းဘီတွေ၊ ကလေးအဝတ်အစား၊အသုံးအဆောင်တွေ၊ အရုပ်တွေ၊ ကလေးလက်တွန်းလည်းတွေ၊ စတာတွေ..ကို စိတ်မဝင်စားခဲ့ပေမယ့်….
ကလေးကစားစရာတွေ၊ အင်္ကျီလေးတွေ၊ခေါင်းလိမ်းဆီတွေ၊ ကလေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့အရာတွေကို စိတ်ဝင်စားစွာဝယ်ယူပြီး ကလေးကစားစရာပစ္စည်း ဈေးကွက်ထဲကို စားသုံးသူတစ်ယောက်ဝင်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။
အချို့သူတွေက ဈေးကွက်ထဲဝင်မလာသေးတာ၊ ဈေးကွက်မရှိတာမဟုတ်ဘူး။
ဈေးကွက်ထဲမှာ ကလေးအသုံးအဆောင်ပစ္စည်းတွေက အရင်ကတည်းကရှိတယ်။ ဝယ်နေကြတဲ့သူတွေရှိသလို၊ ရောင်းနေကြတဲ့သူတွေရှိတယ်။ အဲဒီဈေးကွက်ထဲကို ကိုယ်က ကလေးမွေးပြီးလို ခုမှ ဝင်ဖို့လုပ်နေတယ်။
အဲဒီအချိန်ကို ဈေးကွက်တံခါးပေါက်မှာ ရပ်နေချိန်လို့ ခေါ်ပါတယ်။
ဆေးရုံမှာ ကလေးမွေးပြီးကာစ မိသားစုတွေကို ကလေးပစ္စည်းအသုံးအဆောင် လက်ဆောင်အချို့နဲ့ ကိုယ်ဆိုင်၊ကိုယ်လုပ်ငန်းကြေငြာကို ပေးလိုက်ခြင်းက ဈေကွက်ထဲဝင်လာမယ့်သူကို တံခါးပေါက်မှာ ကြိုဆိုလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလိုကြိုဆိုဖို့အတွက် ဈေးကွက်ရဲ့တံခါးပေါက်တွေကို သိထားဖို့လိုတယ်။
ကိုယ်ကကော်ဖီဆိုင်ဆိုရင်…ဈေးကွက်တံခါးပေါက်က ဘာလဲ? ဘယ်နေရာလဲ ?
စားသောက်ဆိုင်ဆိုရင် ….ဈေးကွက်တံခါးပေါက်က ဘာလဲ ? ဘယ်နေရာလဲ ?
အိမ်ဆောက်ပစ္စည်းဆိုင်ဆိုရင်…ဈေးကွက်တံခါးပေါက်က ဘာလဲ ? ဘယ်နေရာလဲ ?
အလှကုန်ဆိုင်ဆိုရင်….ဈေးကွက်တံခါးပေါက်က ဘာလဲ ? ဘယ်နေရာလဲ ?
လျပ်စစ်ပစ္စည်းဆိုင်ဆိုရင်…ဈေးကွက်တံခါးပေါက်က ဘာလဲ ? ဘယ်နေရာလဲ ?
စာရေးကိရိယာဆိုင်ဆိုရင်.. ဈေးကွက်တံခါးပေါက်က ဘာလဲ ? ဘယ်နေရာလဲ ?
ဖက်ရှင်ဆိုင်ဆိုရင်… ဈေးကွက်တံခါးပေါက်က ဘာလဲ ? ဘယ်နေရာလဲ ?
ဈေးကွက်ဆိုတာ ဝင်ပေါက်ရှိတယ်။ ထွက်ပေါက်ရှိတယ်။
ထွက်သွားတဲ့သူတွေ ရှိသလို၊ ဝင်လာတဲ့သူတွေ ရှိတယ်။
ထွက်သွားတဲ့သူတွေကို အာရုံစိုက်၊ အကုန်ကျခံပြီး လိုက်ဆွဲခေါ်မယ့်အစား၊ ဝင်လာမယ့်သူတွေကို တံခါးပေါက်ဝမှာ ကတည်းက ကြိုဆို ဆွဲခေါ်ပြီး ကိုယ့်လုပ်ငန်း၊ ကိုယ်ဆိုင်ကို လမ်းပြထားဖို့လိုတယ်။
တံခါးပေါက်၀ မှာ ကြိုဆိုလိုက်ပါ။
တွေးမိသလောက်တံခါးပေါက် နဲ့ ကြိုဆိုပုံကြိုဆိုနည်းလေးတွေကို လွတ်လပ်စွာရေးသားမန့်ခဲ့နိုင်ပါတယ်။